ဥရောပစေရန်တစ်ဦးကခရီးစဉ်စီစဉ်ရန်ကဘယ်လို | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပစေရန်တစ်ဦးကခရီးစဉ်စီစဉ်ရန်ကဘယ်လို
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 23/10/2020)
သငျသညျဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်! အဆုံးမဲ့သောနေရာများ နှင့်အတွေ့အကြုံများ, သငျသညျအနှစ်ပေါင်းများစွာခရီးသွားလာခြင်းနှင့်သင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုလွဲချော်ပါတယ်တူသောနေဆဲခံစားရနိုင်ကြောင်း. ဤသည်ကိုအောင် ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည် ခရီးသွားအမှားများ ကျူးလွန်၏, နှင့်လုပ်သောသေးငယ်အသေးစိတ်ကိုအပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံး ဒါကြောင့်မှော်ခရီးသွားနှင့်ရထားခရီးသွား. အကြှနျုပျတို့သညျမပွုသငျ့သညျအဘယျသို့ဆိုသညျကားရန်နှင့်ဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်ဖို့ကိုဘယ်လိုကဒီမှာနေ, အစကတည်းကမှ finish ကို!
အဖျား 1: Down ဒါဟာအကျဉ်းချုံး
သငျသညျစစ်မှန်စပိန် Tapas တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မီ, Piazza ရောမမြို့မှာရှိတဲ့သို့မဟုတ် ခေါင်မိုးပေါ်ရှိကျန်ကြွင်းသောနေရာများ ပရာ့ဂ်၌, admin ရဲ့အရေးပါသောနည်းနည်းလိုအပ်ပါသည်! ရိုးရှင်းစွာအထား, သငျသညျဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်တဲ့အခါသင်များမှာပိုမိုပြင်ဆင်ထား, ပျော်စရာနှင့်သင့်မျှော်လင့်ချက်မှတက်အသက်ရှင်တော်မူသည်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ခရီးစဉ်သည်သင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကို သာ..
ဒီတော့ဒီမှာသည်အကယ်ရထားသိကောင်းစရာ: ထိပ်တန်းငါးခုကိုရွေးပါ, ကြောင်းဥရောပစွန့်စားမှုအဘို့အရပါမည်-dos! ကိုယ်က&#၈၂၁၇;့သောက်အတွက် Hofbrauhaus တွင် မြူးနစ်, သို့မဟုတ် တစ်တူးမြောင်းခရီးစဉ်ယူပြီး အမ်စတာဒမ်, သို့မဟုတ် ဒါဝိဒ်သည်-ကနေဆန်းစစ်အများအပြားထောင့် – Florence မှာ. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, သူတို့အဆင်းအထိမ်းအမှတ်နှင့်သူတို့ကိုပတ်လည်မှာသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်. ရထားများကဦးစားပေးမည်.
Frankfurt မှ Munich ရထားလက်မှတ်များ
အဖျား 2: အဆိုပါclichéကိုရှောင်ရှားမနေပါနဲ့.
အခုတော့အကြှနျုပျတို့သညျဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်ရန်လိုအပ်မြဲမြံစွာတည်သွားပါပြီ, လာမယ့်သင့်ရဲ့ထိပ်တန်းနေရာများရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်. YOLO ၏စိတ်ဝိညာဉ်၌, သင်ရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းပယ်သွားနှင့်ရှာဖွေချင်စေခြင်းငှါ ဝှက်ထားသောကျောက်မျက် မြို့များကိုအတွင်း. ဒါပေမယ့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းခရီးစဉ်ဆန့်ကျင်သွားကြဖို့လိုလားကြောင်းကိုသင်အတွက် hipster, တစ်ဦးထိုင်ခုံကိုယူချင်စေခြင်းငှါ. တစ်ခရီးသွားဘတ်စ်ကားတွင်. အရပ်တို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ဘာလို့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ် အဆိုပါ Colosseum, အီဖယ်မျှော်စင်, နှင့် ချားလ်စ်တံတား are all အလွန်လူကြိုက်များ ခရီးသွားဧည့်အတူ: သူတို့ကြောက်မက်ဘွယ်အနေဖြင့်! သင်ရရန်ရှိသည်မခံစားရပါနဲ့ အဆိုပါရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကိုပယ် ကိုယ့်ကြောင့်၏မျက်နှာကိုထောက်. ကြီးနေလျှင် ဆွဲဆောင်မှု သငျသညျမှအယူခံ, ထို့နောက်သူတို့ကို သွား. ကြည့်.
တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့်, ဧဝံဂေလိတရားကိုအဖြစ်လမ်းညွှန်စာအုပ်ပြုမူဆက်ဆံကြဘူး. ဒါဟာ Louvre တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးအကြွင်းမဲ့အာဏာမဖြစ်မနေ-do ဆိုစေခြင်းငှါ, ပဲရစ်ခရီးစဉ်, but maybe you’d haveabetter day searching for Blek le Rat pieces on alley walls. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, သငျသညျသွားလာသည့်အခါ, သော့ချက်, အမြဲ!
လန်ဒန် Frankfurt ရထားမှ
အဖျား 3: Travel dates are crucial when you planatrip to Europe
ထဲမှာခရီးသွားခြင်း ရာသီချွတ်. လူကြိုက်များလအတွင်းဇူလိုင်လများမှာ, သြဂုတ်လ, စက်တင်ဘာလ. သူတို့ကလောက်မရှိတဲ့အလုပ်ရှုပ်နေကြသည်, စျေးကြီးဖော်ပြခြင်းမ! သငျသညျနွေရာသီအတွက်ဥရောပခရီးစဉ်အစီအစဉ်ရှိပါက, သင်သည်သင်၏အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေသန်းပေါင်းများစွာသောနှင့်အတူတိုင်းတစ်ခုတည်းအတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပါလိမ့်မယ်. နေရာထိုင်ခင်းအထဲကကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပါလိမ့်မည်, သို့မဟုတ်စျေးကြီးနှင့်ရထားပိုပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်, သူတို့ခရီးသွားလာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းမြင်လျှင်!
အဖျား 4: Assemble your travel documents is part of planajourney to Europe
သင်တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိပါက, ပြီးနောက်သင်အကောင်းဆုံးနှိမ်နင်းရ! သင်တဦးတည်းကိုလက်ခံရရှိရန်အဘို့အဒါဟာလျှောက်လွှာ၏အချိန်ကနေကအနည်းဆုံးလေးယောက်မှခြောက်ပတ်ကယူလိမ့်မယ်. (သငျသညျသင်တန်းတှငျနထေိုငျသောအရာကိုတိုင်းပြည်ပေါ် မူတည်.) အမြန်န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အရှိန်မြှင့်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကကုန်ကျမည်. သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်မတိုင်မီကြိုတင်၌ဤကောင်းစွာဂရုစိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးဒါဟာင်. ယခုပင်လျှင်မယ့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ? ယင်း၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ Check! ဒါကြောင့်အတွင်းကုန်ဆုံးလျှင်အချို့သောနိုင်ငံများကသငျသညျ entry ကိုငြင်းပယ်နိုင်ပါတယ်6သငျသညျရောက်လာသောအခါလ. ပေးရပါတယ်!
အဖျား 5: ကားတစ်စီးငှားရမ်း.
လိုသော ကားငှား သငျသညျဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်သည့်အခါ? ခိုင်လုံသောယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသည်ဖို့သေချာပါစေ. တချို့ကကားကိုငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများလည်းမူရင်းကိုသူတို့နိုင်ငံကနေသူတို့ရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသည်ဖို့ခရီးသွားများအတွက်လိုအပ်.
Strasbourg to Paris Train လက်မှတ်တွေ
အဖျား 6: သိပ်အများကြီးနေရာများနှင့်သင်၏ခရီးစဉ်ထုပ်ပိုး Over-မနေပါနဲ့.
ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်, ကျော်လွန်းအတွက်ညှစ်ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ကြိုးစားရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်. ဒါဟာလုံးဝနားလည်င်. သင့်ရဲ့အဖိုးတန်ခွင့်ကောင်းစွာအသုံးချခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့် Over-ထုပ်ပိုးဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်သည့်အခါသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကြိုးစားရန်လွယ်ကူပါတယ်. သို့သျောလညျး, ဒီအဘိုးထိုက်သောနိုင်ပါတယ် (ကုန်ခမ်းတော့မှာဖော်ပြခြင်းမ), အရမ်းရက်အနည်းငယ်အတွင်းများပြားလွန်းနေရာများနှင့်အတူ Over-ထုပ်ပိုးခရီးစဉ်လမ်းမပေါ်တွင်အချိန်ပိုမိုစေပါတယ်အဖြစ်, နှင့်ပိုပြီးဓါတ်ငွေ့သို့မဟုတ် ရထားလက်မှတ်တွေ. အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်, ကခရီးစဉ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်, ဟိုတယ် Check-ins နှင့် Check-တနေရာတစ်မှုန်ဝါးသို့လှည့် (စဉ်ဆက်မပြတ်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဖွင့်နေသည်နှင့်အတူ), ရထားပြတင်းပေါက်အတိတ်တစ်-သွားရောက်ခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှရှုခင်းပြိုင်ပွဲကြည့်နေစဉ်. ဖြစ်နိုင်လျှင်, အရှိန်လျော့သည်. သငျသညျလိမ့်မယ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ကယ်တင် နှင့်သင့်နေရာများလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပိုအချိန်ရရှိ.
Antwerp သို့ Rotterdam ရထားလက်မှတ်များ
ဘာလင်မှ Rotterdam ရထားလက်မှတ်တွေ
အဖျား 7: ပိုက်ဆံအိတ်ချိန်း
ခရီးသွားများအတွက်သူတို့ရဲ့ဘဏ်ထံမှယူရို purchasing ပိုက်ဆံတွေအများကြီးဖြုန်း (သို့မဟုတ်ပိုဆိုးသေး, တစ်ဦးအနေဖြင့် ငွေကြေးလဲလှယ်ကောင်တာ) ဥရောပတိုက်တွင်မရောက်မီ. ဤသည်ကြီးမားကျယ်ပြအခကြေးငွေအတွက်ရလဒ်များ! so don’t neglect this subject when you planatrip to Europe.
ကျွန်ုပ်တို့၏အကွံဉာဏျသငျသညျဥရောပ၌ရောက်လာသောအခါတစ်ဦး ATM စက်များမှဖြောင့်ကွယ်ပျောက်ခေါင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့် ATM စက်များကဒ် အသုံးပြု. ငွေသားထုတ်ယူ. ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့င်, သင်ငွေပေးငွေယူဘို့ get သောငွေလဲနှုန်းနီးပါးဆက်ဆက်ကျွန်တော်ပင်အိမ်ပြန်ဘဏ်များထံမှဆည်းပူးကြပါပြီမည်သည့်နှုန်းထက် သာ. ကောင်း၏. သငျသညျကိုနိုင်ငံတကာ ATM စက်များငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေနှင့် ပတ်သက်. မေးရန်စွန့်ခွာမီသင့်ဘဏ် Call, သင်တို့ကဲ့သို့ပြည်ပကသင်၏ကဒ် အသုံးပြု. ပါလိမ့်မည်သောသူတို့ကိုအသိပေး. သင်သည်ထိုသူတို့ပြောပြမထားဘူးဆိုရင်, အဲဒါကိုလိမ်လည်မှုရဲ့စဉ်းစားရန်သူတို့ကိုသတိပေးစေခြင်းငှါ,, နှင့်သင့်ကဒ်ပိတ်ဆို့ပါလိမ့်မယ်. လည်း, သင်၏ဘဏ်ရှိပါတယ်လျှင်မေးဖို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာများ သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ ဒေသဆိုင်ရာ ဥရောပတိုက်တွင်ဘဏ်များ.
Frankfurt မှ Cologne ရထားလက်မှတ်များ
Stuttgart to Cologne ရထားလက်မှတ်များ
အဖျား 8: သင်တျအပွောငျးအလဲအပေါ်ဆုံးရှုံးအဘယျသို့, သငျသညျအဝိုင်းတွင်အပေါ်အနိုင်ရ
သေးငယ်တဲ့ဟိုတယ်ငွေစုဘို့သင့်တည်နေရာကိုပူဇျောမနေပါနဲ့. ကျွန်တော်တို့ သငျသညျဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်သည့်အခါအရှိဆုံးဗဟိုတည်နေရာနှင့်သင်၏ Airbnb သို့မဟုတ်ဟိုတယ်ကို preference ကိုပေးကမ်းအကြံပြု. ဘတ်ဂျက်ခရီးသွားများအတွက်, အထူးသဖြင့်, €5ရဲ့တစ်ဝေးလံတည်နေရာအတွက်ဟိုတယ်ကိုရှေးခယျြဖို့စိတ်သဘောထားရှိသည် ထက်စျေးနှုန်းချိုသာ ပိုပြီးဗဟိုရဲ့တဦးတည်း. သငျသညျလိမ့်မယ် အချိန်ကုန်သက်သာ နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ပိုက်ဆံ (သငျသညျတက္ကစီယူပြီးတက်လေအထူးသဖြင့်ပါလျှင်).
အဖျား 9: Don’t forget to call your phone carrier before you planajourney to europe
သငျသညျအပြည့်အဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်ပြီးအစီအစဉ်ကိုကိုယ့်ရဖို့တစ်ချိန်ကသင့်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘော Callသင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်, f, ပြီးနောက်သင်မတော်တဆဒေတာစွဲချက်ကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ဖုန်းကိုဖွင့်လှစ်သေချာအောင် (အကျဉ်း: ဆယ်လူလာဒေတာကို turn off နှင့်ဆယ်လူလာဒေတာကိုသုံးနိုင်သည်ကြောင့် apps တွေရဲ့အရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ရန်). နှင့်, အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်, အီးမေးလ်များကိုဒေါင်းလုဒ်ပေးပို့ခြင်းဘို့ကို Wi-Fi ကွန်ယက်လွတ်မြောက်ကပ်, Web ကိုစစ်ဆေးနေခြင်းနှင့်သုံးပြီး apps များ. ဥရောပအများအပြား Wi-Fi Hotspots ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်အကြာကြီးထိတွေ့ထဲကလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. တစ်နည်းအားဖြင့်, သငျသညျဥရောပရသည့်အခါသင်၏ဖုန်းများအတွက် SIM ကဒ်ကိုဝယ်.
ရောမမြို့မှ Florence ရထားလက်မှတ်တွေ
အဖျား 10: တစ်ခုက App ကိုအဲဒီအတှကျရှိပါတယ်
Eightydays is an awesome travel app that can help you planatrip to Europe while giving travelers an easy look into the options available when ဥရောပတလွှားခရီးသွားလာ.
အသုံးပြုသူများကိုစတင်ရန်နှင့်ပြီးအောင်တစ်မြို့ကောက်နေစတင်အသုံးပြုနိုင်မည် (အခုအတွက်တော့, တူရာဌာန၌ခရီးစဉ်စတင်အဆုံးသတ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖွင့်). ထို့နောက်ထွက်ခွာသွားသည့်ရက်စွဲကို select, ဘယ်လောက်ရှည် ခရီးစဉ် ဖြစ်များနှင့်မည်မျှပါလိမ့်မယ် ခရီးစဉ် ထည့်သွင်းရန်. သူတို့ဥရောပမှာမြို့ကြီးများကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အသုံးပြုသူများလည်းရွေးနိုင်သည်, ဥရောပသမဂ္ဂသို့မဟုတ်ရုံ Schengen ဇုန်. ဒီ app ထို့နောက်တစ်ဦးခရီးစဉ်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်, တစ်ဦးချင်းစီမွို့၌ Airbnb နှုန်းထားများနှင့်အတူပြည့်စုံ, ဘတ်ဂျက်အပေါ်သူတို့အဘို့.
ကောင်းသောကြည့်တဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်မှာ app ကိုလဲသည်အထိ shuffle options များဆက်လက်ဖြစ်နိုင်သမျှဒါဟာင်. နှင့်အဆင်မပြေခရီးသွားစိုးရိမ်ကြဘူး: The site says ဒါကြောင့်အထူးသဝေး-ဝေးလေဆိပ်ထွက် weeds and early morning departures that can drain travelers on the road.
မဖွင့်ပေမယ့် (သေး) တစ်ခုလုံးကို booking ဘို့ပြီးပြည့်စုံမှုစနစ် ဥရောပခရီးစဉ်, Eightydays အလားအလာသူတို့ယခင်ကရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါနေရာများမှသူတို့ကိုမိတ်ဆက်စဉ်ခရီးသွားများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောခရီးများအတွက်စျေးနှုန်းအမှတ်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပေးပါကူညီပေးနိုင်ပါသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစား.
Travlelers can use အဆိုပါ Eightydays က်ဘ်ဆိုက် or the newly launched iOS က app ကို to plan their European voyages.
အမ်စတာဒမ်မှ Antwerp ရထားအချိန်
ဘရပ်ဆဲလ်မှ Frankfurt ရထားအချိန်
ဘရပ်ဆဲလ်မှ Mainz ရထားလက်မှတ်တွေ
ဒါပေါ့, ခရီးသွားလာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရထားအားဖြင့်အစဉ်အမြဲဖြစ်ပါသည်! တစ်ဦးရထား Save သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ရထားလက်မှတ်တွေ link ကို click နှိပ်ပြီးစာအုပ်ဆိုင်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် https://www.saveatrain.com အလွန်ကြီးစွာသောအထူးလျှော့စျေးလက်ခံရရှိရန်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fplan-trip-europe%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်အဆိုပါ/ပြင်ဆင်ရန်/က/ႏပိုပြီးဘာသာစကားများ.
#bucketlist #HowToGuideEurope europetravel longtrainjourneys ရထားအကြံပေးချက်များ ခရီးသွား traveltips